माग पूरा नहुन्जेल डडेलधुरा छोड‍्‍‍दिनँ, अनसन पनि तोड‍्‍दिनँ : डा. केसी – " सुलभ खबर "
माग पूरा नहुन्जेल डडेलधुरा छोड‍्‍‍दिनँ, अनसन पनि तोड‍्‍दिनँ : डा. केसी
डडेल्धुरा : आफूले जनताका लागि सरकारसँग राखेका माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने डा. गोविन्द केसीले जनाएका छन् ।उनले डडेलधुरा पनि नछोड्ने अडान लिएका छन्। अनसनरत डा. केसीलाई सत्तारढ दल नेकपाबाहेक प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँगै अन्य साना दल नेकपा जनमोर्चा, राप्रपा नेपाल समाजवादी पार्टी, साझा विवेकशीललगायतका दलले समर्थन जनाएका छन्।
डा. केसीलको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको डडेलधुरा अस्पतालका मेसु जितेन्द्र कडेलले बताए । स्वास्थ्यमा जटिल अवस्था आए डडेल्धुरा अस्पतालमा उनको उपचार गर्न नसकिने अस्पतालले जनाएको छ ।
१८ गते देखि डडेल्धुरामा अनसनरत केसीको स्वास्थ्य भने प्रतिकुल बन्दै गएको छ । उनको शरीरमा चिनी र नुनको मात्रा कम भई स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखा पर्न थालेका छन् ।
उनको शरीरमा अक्सिजन पनि कमी हुन थालेको छ । पिसाबमा खराबी देखिएको चिकित्सकले जनाएका छन् । ब्लडपेसर तलमाथि भइरहेको र शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्व कमीका कारण कमजोर भई रिंगटा लाग्ने मांशपेसी बाउडिने , दुख्ने भइरहेको उनका समर्थन र सहयोगका लागि काठमाडौंबाट डडेल्धुरा पुगेकी डा. तोषिमा कार्कीले जानकारी दिइन्।
डडेलधुरा अस्पतालको नाजुक अवस्थाका कारण उनलाई धेरै दिन यहाँ राख्नु खतारा भएको उनको भनाई छ । ‘आइसीयु को व्यवस्था छैन उनलाई अब डा. केसीलाई चाँडै आइसीयुमा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ डा. कार्कीले बताइन्।
सुदुरपश्चिमका डोटी, बैतडी, कैलाली , कञ्चनपुरबाट पनि केसीलाई समर्थन गर्दै डडेल्धुरामा आन्दोलन गर्न विभिन्न पार्टीका नेता, सघंसस्थाका प्रतिनिधि आउने क्रम जारी छ। मंगलबार उनको समर्थनमा हस्ताक्षर सकंलन गरी जिल्ला प्रशासनमार्फत सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको नागरिक समाजले जनाएको छ।
सोमबार प्रहरी लगाएर डा.केसीलाई काठमाडौं लैजान खोज्दा उनका भाइ किसोर केसीसँगै स्थानीय नागरिक समाज पत्रकार, र सर्वसधारण प्रतिकारमा उत्रिएपछि उनलाई लिन आएको सेनाको हेलिकोप्टर फिर्ता गएको हो।